Shiinaha kartoo Solar boorsada boorsada - saarayaasha, shirkado, warshad - xigasho - Dongguan Zhihao Boorsada Warshadaha Co., Ltd.
Hoyga > Boorsooyin > Boorsada hal-garabka ah > Boorsada boorarka cadceedda
(1) Boorsada qorraxda ayaa leh 7-watt qoraxda oo ka qaadi kara 10,000 mAH baytariyada lithium polymer-ka ee biyuhu galaan. Qalabka qoraxda sidoo kale waa laga saari karaa, markaa waad tilmaami kartaa meel kasta oo aad rabto, ama waad iska bixin kartaa socod habeennimo ah. Maaddada nayloonku waxay ka dhigeysaa boorsada mid khafiif ah oo biyuhu xireen, taasoo ka dhigaysa bacdan ugu habboon ee dalxiiska dibadda. (2) Gudaha sidoo kale waxaa ka buuxa howlo badan oo qurux badan. Haddii aad tixgeliso daboolka difaaca gudaha ee laptop-kaaga markaad safraysid, ama aad sawiro ka soo qaadatid oo keliya kamaradda. (3) Waxaa jira jeebado yaryar oo loogu talagalay qalabka, baytariyada iyo waxyaabo kala duwan, iyo sidoo kale dhabarka dambe ee qaybta qorraxda si loo ilaaliyo PowerBank. Qeybta ugu weyn ee boorsada waa waasac oo jeebado badan ayaa ku dhex jira, sidaas darteed dukumiintiyada ama khariidadaha kuma lumi doonaan boorsada.
1. Hordhaca alaabada boorsada qorraxda:
(1) Boorsada qorraxda ayaa leh 7-watt qoraxda oo ka qaadi kara 10,000 mAH baytariyada lithium polymer-ka ee biyuhu galaan. Qalabka qoraxda sidoo kale waa laga saari karaa, markaa waad tilmaami kartaa meel kasta oo aad rabto, ama waad iska bixin kartaa socod habeennimo ah. Maaddada nayloonku waxay ka dhigeysaa boorsada mid khafiif ah oo biyuhu xireen, taasoo ka dhigaysa bacdan ku habboon dalxiiska dibadda.
(2) Gudaha sidoo kale waxaa ka buuxa shaqooyin badan oo qurux badan. Haddii aad tixgeliso daboolka difaaca gudaha ee laptop-kaaga markaad safrayso, ama sawirrada uun ka soo qaad kamaradda.
(3) Waxaa jira jeebado yaryar oo loogu talagalay aaladaha, baytariyada iyo waxyaabo kala duwan, iyo sidoo kale dhabarka qeybta qorraxda si loo ilaaliyo PowerBank. Qeybta ugu weyn ee boorsada waa waasac oo jeebado badan ayaa ku dhex jira, sidaas darteed dukumiintiyada ama khariidadaha kuma lumi doonaan boorsada.
(4) Naqshadeynta waxay leedahay cimri dherer dhibco rebar. Waxay kaloo leedahay suun duuban iyo dhabarka si raaxada loo kordhiyo; iyo suunka sternum si loo wanaajiyo xasilloonida.
(5) Suunka garbaha ee duuban iyo qeybta dambe waxay xaqiijin karaan raaxada ugu dambeysa inta lagu guda jiro socodka dheer. Suunka sternum wuxuu hubiyaa in bacda ay xasilloon tahay iyadoon loo eegin jimicsi.
. Waxa kale oo ay leedahay bac balaastik ah oo balaastikada biyaha lagu fidi karo oo dhinaca ah.
(7) Maaha kiishka ugu weyn ee wax lagu rito oo qaadkiisu yahay 25 litir, laakiin xaqiiqdii waa kan ugu fiican xagga hawlaha iyo shaqooyinka. Thanks to tiknoolajiyada horumarsan iyo walxaha adag ee PET, miisaankiisa ayaa runtii hoos u dhacay 5 rodol.
(8) Boorsada qorraxda ayaa dammaanad gaar ah siinaysa boorsada lafteeda iyo fiilooyinka qorraxda. Tani waxay xaqiijin kartaa in laguu ballan qaadi karo xagga tayada iyo waxqabadka.
2. Boorsada cadceedda product parameters (specifications)
Dharka Nylon Oxford
Dhererka 30cm X Ballaca 22cm X Dhererka 54cm
3. Sidee loo doortaa boorsada ugu fiican ee qorraxda?
(1) Haddii adduunka aynu ku waalan nahay ee mobilka adduunka ay noo sheegaan, markaa waa inaan marwalba sidnaa bangiga tamarta moobiilka. Hadda ma jiraan taleefannada casriga ah ee suuqa yaalla oo maalintii oo dhan la isticmaali karo, meelaha korontada laga helo markastana lama helo. Kawaran hadaad safreyso, tug lugaynayso, baaskiil wadid ama aad booqanayso magaalada oo dhan? Waxaad u baahan tahay wax lagu kalsoonaan karo, oo ka sii muhiimsan, wax dib loo soo celin karo. Taasi waa meesha boorsada qorraxda ay ku habboon tahay.
(2) Maaddaama aad maalintii oo dhan ku dhex socon doontid qorraxda, fadlan weydii dabeecadda inay ku siiso xoogaa gargaar ah oo aad keento rugtaada lacag-bixinta. Boorsada qorraxda ma aha isha kaliya ee aad ka hesho awoodda, laakiin waa aaladda ugu fiican ee kaa horjoogsanaysa inaad ka dhammaato casiirka waqtiga ugu xun. Bal qiyaas qarowga batteriga taleefanka gacanta ee bakhtiyay ee ku lumay dal shisheeye.
(3) Boorsada qorraxda waa mid ka mid ah xulashooyinka ugu wanaagsan ee lagu dallaci karo aalado kala duwan, sida taleefannada gacanta, ipads, saacadaha casriga ah, bangiyada korantada iyo kamaradaha leh dekedda USB ee isku dhafan.
(4) Waxaa jira jeebab badan gudaha, kuwaas oo si fudud u abaabuli kara dhammaan walxaha. Waxa kale oo laga sameeyaa maaddada loo yaqaan 'light-light' iyo 'cimri dherer' oo aan biyuhu ka madhnayn oo aan dahaadh lahayn. Si kale haddii loo dhigo, kani waa shandad qorrax-celin aan biyuhu lahayn
(5) Waxaad sidoo kale ku raaxeysan kartaa xargaha garabka suufka ah ee loogu talagalay in lagu kordhiyo raaxada marka la isticmaalayo baararka qoraxda la qaadan karo. Haddii aad ubaahantahay boos dheeraad ah boorsada qorraxda ee socodka, waxaad isticmaali kartaa ikhtiyaarka qaybta ballaarinta.
5. Boorsada cadceedda packaging and delivery
(2) Cabbirka baakadka ee caadiga ah: dherer 30cm X ballac ah 22cm X dherer 54cm, waxaan u habeyn karnaa cabbirka baakadka naqshadeynta hadba baahidaada, si loo badbaadiyo xamuulka.
(4) Miisaanka guud ee sanduuqa oo dhan: 9.2Kg.
(5) Miisaanka saafiga ah ee sanduuqa oo dhan: 7.2Kg.
Calaamadaha kulul: Boorsada guddi-qorraxda, Shiinaha, soosaarayaasha, alaab-qeybiyeyaasha, warshad, habeysan, qiimaha, oraahda, keydka